မုန့်လက်ဆောင်(စ-ဆုံး) Mont Let Saungခန့်စည်သူ၊ ခိုင်သင်းကြည်၊ မိုးဒီ၊မေသက်ခိုင်၊စွမ်းရည်လင်း
Shwe Myat Chel Media หลายเดือนก่อน
မေတ္ထာဖွဲ့ ဟာသ ဇာတ်ကား
ခန့်စည်သူ၊ ခိုင်သင်းကြည်၊ မိုးဒီ၊မေသက်ခိုင်၊စွမ်းရည်လင်း
ဇာတ်လမ်း - ချစ်ပိုးရူပါ
ဇာတ်ညွှန်း - ကိုရာဟု
ဒါရိုက်တာ - မောင်ဒေါန
မောင်ဒေါင်း တစ်ယောက် အညာသားချင်း ကိုချက်ကြီး မြှောက်ပေးတာလည်း တစ်ကြောင်း၊ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း ညှိချင်ချင် ဆိုတော့ ကလေးတစ်ယောက်အမေ မအေး ချစ် ကို လက်ထပ်လိုက်တယ်လေ။
မအေးချစ်ရဲ့ သမီး ဝိုင်းရီက အပေါင်းအသင်း မကောင်းတော့ ဆေးမှုနဲ့ မှာယွင်းပြီး အချုပ်ခံရတာကို မအေးချစ် ကြားပြီး အိမ်ပေါ်က လိမ့်ကျပြီး ဆေးရုံပို့လိုက်ရပါလေရော။ မအေးချစ် ဆုံးပါးသွားပြီးနောက် မယာပါသမီးနဲ့ ပထွေး တစ်အိမ်ထဲ နေကြတာကို အရပ် က စွတ်စွဲ လာကြတယ်။
မောင်ဒေါင်းတစ်ယောက် မယားပါသမီး နဲ့ လောကဓံ ကို ဘယ်လိုတွေ ရင်ဆိုရသလဲဆိုတာ မုန်လက်ဆောင် မှာ ခံစားပါနော။
မြန်မာ ဇာတ်ကား ချစ်သူအမျိုးတို့ရေ
- ရွှေမျက်ခြယ် ကို ကြည့်ပြီးလို့ နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် Subscribe လုပ်ပေးပါ။ ခေါင်းလောင်းလေးကို နှိပ်ထားပါနော။ Like ကလေးနှိပ်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း Share ပေးပါနော။
အားတဲ့ အချိန် လေးမှာ Comment လေးတွေလည်း လာရေးပါနော။ ယဥ်ကျေးသော Comment လေးတွေ၊ အားပေးတဲ့ Comment လေးတွေ ဖတ်ရတာကို ရွှေမျက်ခြယ်က ဂုဏ်ယူပါတယ်နော။
Myanmar New Movie Myanmar Comedy Video Myanmar Comedy Movie Myanmar Drama Movie
Good💚🙂 from myanmar🇲🇲😂
Soe Thu8 วันที่ผ่านมา
Aung Aung Thu11 วันที่ผ่านมา
Nong Minny11 วันที่ผ่านมา
Si Si19 วันที่ผ่านมา
Ashin Indãsãra21 วันที่ผ่านมา
not good i dont like
အပိုတွေ ထက် တင် ပေးပါလားဟင် 🤣🤣🤣👍👍👍👍
Naing naing Winbtsหลายเดือนก่อน
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဇတ္လမ္းလည္းေကာင္း ပညာလည္းရ တင္ေပးတာေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္
!? !? !? NONO what einstein KWIE it's even in fact the first news does name Swa education wken education LOO e? 😁😘😭😭😭😭🤧😫😭😭😭😭😭😥😿😿😿😿💔💝💖💌💦👏🏻🤱🏻💏🏻👩‍❤️‍💋‍👩👨🏻‍👦🏻
!? !? Police had no intention of them and the other people are going back to go
!? !? !? !? !? !? !? !? !? 😁😁?WOKEKRK dutch EKDJD identify? Usa
Aung chit Aung chitหลายเดือนก่อน
Ghsvhsvnd CNN so
Lah Woon Paing
Mi kay`s Ko koหลายเดือนก่อน
@Nann Ko ko မ​ေသဘဲတျခား တြက္ေျပးသြားရင္ပိုမေကာင္းဘူးလါး။🤣
Aww စိတ္ဓာတ္ပဲ😏 ပေထြးေမတၲာေဖာ္ၾကဴးခ်င္တာပါဆို အေမဖစ္သူက ေသေပးရမွာေပါ့ဟ
Nann Ko koหลายเดือนก่อน
အားပေးကြည့်ရှု့တာ ကျေးဇူးပါ။ Kyaw Thu. ရွှေမျက်ခြယ် ဇာတ်ကားလေးတွေကို ကြည့်ရှု့ရတာ နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် ရွှေမျက်ခြယ်ကို Subscribe လုပ်ပြီး ခေါင်းလောင်းလေးကို နှိပ်ထားပေးပါနော။ Like ကလေးလည်း ပေးပြီး အားတဲ့အချိန်လေးမှာ အားပေးသော ယဥ်ကျေးသော Comment လေးတွေ ဖတ်ချင်ပါတယ်နော။ သူငယ်ချင်းတွေကို Share ပေးပါနော။ အပြင် ထွက်ရင် Mask တပ်သွားပါနော။ ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ပါ။ စီးပွားရေးတွေ အဆင်ပြေပြီး ရောဂါ ကပ်ဘေး ကင်းဝေးပါစေလို့ ရွှေမျက်ခြယ် မိသားစုက ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သပါတယ်။
Chan Àye kiopหลายเดือนก่อน
အားပေးကြည့်ရှု့တာ ကျေးဇူးပါ။ Chan Aye Kiop. ရွှေမျက်ခြယ် ဇာတ်ကားလေးတွေကို ကြည့်ရှု့ရတာ နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် ရွှေမျက်ခြယ်ကို Subscribe လုပ်ပြီး ခေါင်းလောင်းလေးကို နှိပ်ထားပေးပါနော။ Like ကလေးလည်း ပေးပြီး အားတဲ့အချိန်လေးမှာ အားပေးသော ယဥ်ကျေးသော Comment လေးတွေ ဖတ်ချင်ပါတယ်နော။ သူငယ်ချင်းတွေကို Share ပေးပါနော။ အပြင် ထွက်ရင် Mask တပ်သွားပါနော။ ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ပါ။ စီးပွားရေးတွေ အဆင်ပြေပြီး ရောဂါ ကပ်ဘေး ကင်းဝေးပါစေလို့ ရွှေမျက်ခြယ် မိသားစုက ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သပါတယ်။
ပထွေးအားလုံး ဒီစိတ်မျိုး ထားနှိုင်ကြပါစေ
အားပေးကြည့်ရှု့တာ ကျေးဇူးပါ။ Yin Kyi. ရွှေမျက်ခြယ် ဇာတ်ကားလေးတွေကို ကြည့်ရှု့ရတာ နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် ရွှေမျက်ခြယ်ကို Subscribe လုပ်ပြီး ခေါင်းလောင်းလေးကို နှိပ်ထားပေးပါနော။ Like ကလေးလည်း ပေးပြီး အားတဲ့အချိန်လေးမှာ အားပေးသော ယဥ်ကျေးသော Comment လေးတွေ ဖတ်ချင်ပါတယ်နော။ သူငယ်ချင်းတွေကို Share ပေးပါနော။ အပြင် ထွက်ရင် Mask တပ်သွားပါနော။ ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ပါ။ စီးပွားရေးတွေ အဆင်ပြေပြီး ရောဂါ ကပ်ဘေး ကင်းဝေးပါစေလို့ ရွှေမျက်ခြယ် မိသားစုက ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သပါတယ်။
အရမ္းေကာင္စလို႔ မ်က္ရည္က်မိပါတယ္ ၾကည့္ရ က်ိဳးနပ္တယ္
Than zew Oo18 วันที่ผ่านมา
အရမ်း အရမ်း ကြိုက်တယ်
ဒီေခတ္မွာ ဒီလို႔ေကာင္းတဲ့ပေတြးမ်ိဳး ရွားပါးသြားပါၿပီ
ကြယ်ပုဝါခြုံထားတဲ့ ကောင်းကင် ခန့်စည်သူ ဇာတ်ကားတင်ပေးပါနေယ်
ကြည့်ရတာ တန်လိုက်တာ အမြဲတန်းအားပေးနေတယ်
ကိုခန့် ဇာတ်ကားမျာများ တင်ေပးပါေနာ့ အားေပးေနလျှက်ပါ Very Good. ေရွှမျက်ခြယ်
မလြတ္​တမ္​းၾကည္​့တယ္​ ခန္​႔စည္​သူ ကားဆိုရင္​
Cherry SuSu Phyoหลายเดือนก่อน
ဇာတ်ကားတွေတင်ရင် မူရင်းနောက်ခံတီးလုံး တွေ ပြန်ထည့်ပေးပါလားဗျာ copyright claim မိတဲ့ နေရာလေးတွေပဲ ပြင်ပြီးတင်ပေူပါလားဗျာ
Khant Thike Ooหลายเดือนก่อน